Free Shipping Maneran-tany - Free International Delivery - WoopShop
Ny fonosana avy amin'ny trano fitehirizam-bokonay any Shina dia halefa ePacket na EMS arakaraka ny lanja sy ny haben'ny vokatra. Ireo fonosana nalefa avy amin'ny trano fitehirizam-bolanay amerikanina dia alefa amin'ny USPS. Noho izany, noho ny antony lojikajika, ny entana sasany dia alefa any anaty fonosana misaraka.
Tsy manana ny fanaraha-maso ny fiampangan'ny fadin-tseranana isika, Tsy tompon'andraikitra amin'ny saram-piantsoana rehetra isika raha vantany vao navoaka ireo entana ireo satria ny politikany sy ny andraikitry ny entana dia samy hafa tanteraka amin'ny firenena. Amin'ny fividianana ny vokatrao, manaiky ianao fa ny iray na maromaro dia azo alefa ho anao ary mety hahazo saram-pandaminana rehefa tonga any amin'ny fireneny.
Aostralia, Nouvelle-Zélande 10-30 andro fiasana
Meksika, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo 15-30 andro fiasana